Podcast 1x23 yeActualidad iPad: Tine Apple Watch uye tinopindura mibvunzo yako | IPhone nhau
1 × 23 Podcast yeActualidad iPad: Tine Apple Watch uye tinopindura mibvunzo yako
IPad nhau | | Apple Watch, Podcast
Zvakakwana kutaura nezveApple Watch usinganyatso kuziva, usina kukwanisa kubata imwe, usina kana kumbozviona iwe pachako. MuActualidad iPad isu tatova neApple Watch uye nekudaro tinogona kutaura chekutanga-ruoko. Kana kuti, mumwe wevaverengi vedu uye vateereri vepodcast anazvo uye achapindura mibvunzo yese iyo yatinayo nezve Apple wachi, zvese zvedu nezvako zvawakatibvunza kuburikidza neblog uye Twitter uchishandisa iyo hashtag #podcastapple. Uri kuzoipotsa here?
Samuel (@Deckard_) akagashira Apple yake yakatengwa muFrance neChishanu 24, zuva rekutanga kuvhurwa kweApple Watch, uye mushure memaawa makumi mana nemasere ekuyedza anotumira kumibvunzo yedu kuti atiudze ndeipi pfungwa yako yekutanga yeApple wachi, mashandiro ayo, masimba ayo makuru uye kushomeka, nezvimwe.. Zvakaringana kutaura usinganyatso kuziva chigadzirwa, iko zvino inguva yekutaura nezvinhu, neApple Watch pachiuno chako.
Iyi ichave yakakosha podcast matinotyora zvakajairika chimiro kuti titsaurire iyo chete kune ino bvunzurudzo neSaMu. Svondo rinouya tichadzokera kuchimiro chedu chemazuva ese nenhau, musoro wevhiki, mashandisiro uye hunyengeri hwevhiki, uyezve chikamu chedu chemumhanzi.
Kana iyo Migwagwa isina zita (U2). Inowanikwa mune yedu playlist ye Spotify.
Teerera »1 × 23 iPad Nhau Podcast: Tine Apple Watch uye tinopindura mibvunzo yako» paSpreaker.
Rangarira kuti iwe unogona kutora chikamu mu podcast uchishandisa iyo tag #podcastapple. Kuti uzviteerere unofanira kungobaya bhatani rekutamba panoperera chinyorwa, kana Nyorera kune Podcast en iTunes e ivoox.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » 1 × 23 Podcast yeActualidad iPad: Tine Apple Watch uye tinopindura mibvunzo yako
Apple Inopa Mhinduro kuApple Tarisa Matero Ekuchaja uye iPhone Bhatiri Drain